एलजी ब्राण्डको नयाँ वर्ष योजना जारी – Aajako Khabar: आजै अनि ताजै
एलजी ब्राण्डले नयाँ वर्ष २०७५ को अवसरमा ‘शुभ आगमन २०७५ लाई, एलजीको शुभकामना सम्पूर्ण नेपालीलाई’ भन्ने मुल नाराकासाथ आफ्नो योजना बजारमा ल्याएको योजना जारी छ । एलजीका हरेक सामाग्रीहरुको खरिदमा निःशुल्क उपहारहरुका साथै ग्राहक महानुभावहरुको जीवनमा नयाँ उत्साहजनक प्रत्याभूति दिलाउनु यस योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको छ ।
यो योजना चैत्र १९ गतेदेखि सीमित अवधिको लागि मात्र लागु हुने कम्पनीले जनाएको छ ।
LG Home Entertainment Offer अन्तर्गत ४ Year Warranty (First Time in Nepal) र ३० प्रतिशतसम्म छुटसँगै ५५ इन्च वा सोभन्दा माथिको OLED तथा Super UHD TVs को खरिदमा SH4 Sound Bar साथै 55″ र 49″ UHD TV को खरिदमा LH64 Home Audio प्राप्त गर्न सकिने कम्पनीले जनाएको छ . Normal र Smart TV को खरिदमा ४ वर्षको वारेन्टी पनि प्राप्त गर्न सकिने छ ।
एलजीका ग्राहकले LG Home Appliances Offer अन्तर्गत Side by Side Refrigerator को खरिदमा रु. १८ हजार ९९० मूल्य पर्ने LG Vacuum Cleaner, Double Door Refrigerator को खरिदमा रु. ६३ सय २० पर्ने केन्टको Pizza & Omelet Maker, Single Door Refrigerator मा रु. ८५० पर्ने Pigeon को Dry Iron, Front Load Washing Machine मा रु. ५ हजार ६९० पर्ने Kent को 20 लिटरको Water Purifier Gold Plus, Top Load Washing Mashing मा रु १५ सय ९० पर्ने CG को Rice Cooker, Dishwasher को खरिदमा रु. १५ सय मूल्य पर्ने Detergent + Liquid, Microwave Oven को खरिदमा रु. २ हजार मूल्य पर्ने LG Cooking Kit र Air Conditioner को खरिदमा रु. २ हजार ६५० बराबरको Free Installation जस्ता आकर्षक उपाहारहरू सित्तैमा प्राप्त गर्न सकिने छ ।
प्रकाशित मिति: २३ जेष्ठ २०७५, बुधबार १०:११ 2018-06-06 , संवाददाता: आजको खबर
Tagged अफर उपहार एलजी ब्राण्ड
आजबाट नारायणघाट–मुग्लिङ्ग सडक पूर्ण रुपमा खुल्ला
२ असार २०७५, शनिबार १४:२१ 2018-06-18
२८ जेष्ठ २०७५, सोमबार २०:०६ 2018-06-11
Tags: अफर, उपहार, एलजी ब्राण्ड